Ma jirto khadad 3D ka dib markii lagu xiro xirmooyinka A330 Multi-Livery
Ma jirto khadad 3D ka dib markii lagu xiro xirmooyinka A330 Multi-Livery sano 2 11 bilood ka hor #703
Marka hore waxaan xiraa xirmada Airbus A330 Multi-Livery, ka dibna waxaan ku xiraa Airbus A340 Mega Package Vol 1. Ka dib, waxaan ku rakibayaa Airbus A340 Mega Package Vol 2. Si dhakhsa ah A330 iyo A340 (Vol. 1) ma haynin xamaasad 3D! Waxaan isku dayay wax walba sida dib u sameynta iyo sida oo kale, waxaana sidoo kale isticmaalay qalabka mucaawinada laakiin taasi way yarayd. Caawimaad kasta waa loo mahadcelin doonaa.
Ma jirto khadad 3D ka dib markii lagu xiro xirmooyinka A330 Multi-Livery sano 2 11 bilood ka hor #711
Waxaan helayaa dhibaato isku mid ah, caawimaad ayaa laga helayaa qof walba.
Ma jirto khadad 3D ka dib markii lagu xiro xirmooyinka A330 Multi-Livery sano 2 11 bilood ka hor #712
Ku kalsoonow labadiinaba iyo soo dhawow.
Diyaaradaha qaarkood ee xirmada waxay ka imanayaan POSKY, mana haystaan ​​VC. Kuwa ka yimid Thomas Ruth waxay leeyihiin.
Ma jirto khadad 3D ka dib markii lagu xiro xirmooyinka A330 Multi-Livery sano 2 11 bilood ka hor #717
Dariussssss ayaa qoray: Iskuday inaad labadiinuba soo dhawataan.
Waad ku mahadsan tahay jawaabta, ma jirtaa si aad u samayso sidaa daraadeed kuwa POSKY kuwa haysta VC?